Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy nday: Holafitra mpampisara-bazana
Inty sy nday: Holafitra mpampisara-bazana
Mibaribary toy ny tafika andrefan-tanana ny maha-saribakolin’ny fitondrana Hvm ny mpitarika ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara amin’izao fotoana. Omaly indray mantsy ohatra dia nampiantso ny mpanao gazety rehetra teny Tsiadana ny Holafitry ny mpanao gazety mba hiara-paly ho fanaovam-beloma ny taona 2017, hono. Dia nambara tamin’ny antso fanasana izay nanomboka naparitaka tamin’ny 9 ora sy sasany maraina fa « amin’izao fotoana izao no hanomboka ny lanonana ». Nasongadina koa ny tokony hahatongavan’ny mpanao gazety rehetra ho fanehoam-piraisan-kina.
Amin’ny mpanao gazety an-jatony eto Andrenivohitra sy ny manodidina dia ampolony vitsy ihany no tonga teny. Ny antony dia ninian’ny Holafitry ny mpanao gazety nokendrena mba ho vitsy ny tonga mba hampitombo ny ambony ampanga hifampizaran’ireo mpikarakara tamin’ny tolotra nomen’ny Hvm azy ireo.
Izany hoe mbola politikan’ny seho ivelany toy ny nataon’ny fitondrana Tim fahiny ary lovain’ny Hvm amin’izao fotoana koa no nataon’ny Holafitry ny mpanao gazety omaly. Mody natao ny lanonana fa ny ho any an-tsikinan’ny mpikarakara no tena napetraka ho tanjona ka nivavahana sy nokendrena mba ho vitsy no tratra antso.
Etsy ankilany, nabaribarin’ny mpanao gazety sasany izay nifampiantso fa « ny Hvm mihitsy no tena namatsy vola an’iny lanonana omaly iny ». Tetsy andaniny anefa dia niharihary toy ny kary an’efitra ny fitaka be vavan’ny Holafitry ny mpanao gazety, izay mody nanandratra ny « firaisankinan’ny mpanao gazety » fa ny « fampisaraham-bazana » no tena nilofosana.
Efa mitetika ny hotohanan’ny Hvm amin’ny fifidianana filohan’ny Holafitra amin’ny fifidianana ho avy mantsy ny mpitarika an’ity Holafitra ankehitriny ity.
Soa ihany fa tsy tafiditra tao anatin’izany vovo izany ny mpanao gazety maro.